Veruzhinji vari kukurudzirwa kuti vape ropa, kunyange hazvo rwendo rwuno vanhu vari kutarisirwa kuderera nekuda kweCovid-19.
National Blood Services Zimbabwe neChishanu yakaparura hurongwa hwekuunganidza ropa mudura rayo ichiti pazororo reKisimusi ratarisirwa kunodiwa ropa rakawanda zvikuru.
Vachitaura neStudio 7 mushure mekuparura chirongwa ichi, mutauriri weNBSZ, Muzvare Esther Masunda vakati zororo reKisimusi rine tsaona zhinji, uyewo madzimai anosunguka anowanda.
Muzvare Masunda vanoti izvi zvinosanganisirawo zvimwe zvirwere zvinoda kuti munhu apiwe ropa vachiti ndizvo zvakavasunda kuti vaparure chirongwa chekuunganidza ropa ichi.
Muzvare Masunda vakatiwo kunyangwe zvazvo vanhu vari pakurwisana nechirwere cheCovid 19, kuwanikwa kweropa rakakwana kwakakosha sezvo zvichibatsira hupenyu hwevamwe.
Vakati vari kutarisira kutsvaka ropa rinosvika mapainzi zviuru zvipfumbamwe nemazana manomwe nemakumi mashanu, kana kuti 9750, rekushandisa kubva pari zvino kusvika panopera zororo munaNdira gore rinouya.
Muzvare Masunda vakatiwo NBSZ ichange ichitsvaka ropa nenzira dzakasiyana-siyana kusanganisira kuenda kudzisvondo nekumwe kunounganiwa kuti vakwanise kuwana ropa rinodiwa.
Vakatiwo sangano reNational Blood Services Zimbabwe riri kukumbira veruzhinji kuti vari batsire neropa remhando ye Blood Group “O” sezvo ropa iri richinyanyodiwa zvakanyanya.
Nyanzvi munyaya dzezvehutano huye vaimbove gurukota rezvehutano Doctor Henry Madzorera vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti nyika ive neropa rakakwana panguva dzakadai sezororo reKisimusi kuitira kuchengetedza hupenyu hwevamwe.
Sangano reNBSZ rinowana ropa rekuisa mudura reropa kune veruzhinji vanopa pachena uye rinoita zvirongwa zvekufamba richitsvaka ropa iri kunzvimbo dzakasiyanasiyana. NBSZ inotiwo kupa ropa kunochengetedza hupenyu hweavo vanenge vachida ropa.
Asi gore rino nekuda kwechirwere cheCovid-19, vamwe vanoti tarisiro yekuwana ropa rakawanda inogona kudzikira zvichienzaniswa nemakore adarika.